सुपर–हेल्दी हुन चाहनुहुन्छ ? – Health Post Nepal
२०७५ मंसिर १७ गते १०:२८
१. ब्रेकफास्ट नछुटाउनुहोस्
ब्रेकफास्ट बहुउपयोगी छ । यसले मेटाबोलिजम राम्रो बनाउनुका साथै अधिक भोकबाट पनि जोगाउँछ । अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा हो, ब्रेकफास्ट खाने युवाले दिनभर काममा राम्रो प्रदर्शन गर्छन् र ब्रेकफास्ट गर्ने बच्चाको खानामा रुचि बढ्छ । यदि कहिलेकाहीँ पूर्ण ब्रेकफास्ट खान पाउनुभएन भने एक पिस भए पनि खानुपर्छ ।
२. आफ्नो खानाबारे योजना बनाउनुहोस्
जतिवेला जे पाइन्छ, त्यही खाने बानी नगर्नुहोस् । प्रायः एकै समयमा खानु र खानेकुरामा व्यवस्थिति हुनु स्वास्थ्यका लागि जरुरी हुन्छ । खानाबारे आफैँले योजना बनाउनुभयो भने सुगर, चिल्लो र कार्बाेहाइड्रेटलाई कम गर्ने योजना बनाउँदै प्रोटिन तथा भिटामिनयुक्त खाना थप्नुहोस् । आफ्नो समयमा आफ्नो योजनाअनुरूपको खाना मात्र खानुभयो भने अनावश्यक समयमा अनावश्यक खाना खाइँदैन ।
प्रशस्त पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि पहिलो सर्त हो । शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ्य रहन तथा तौल नियन्त्रण गर्न प्रशस्त पानी पिउनु आवश्यक छ । पानीले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ । चिनीयुक्त पेयपदार्थले मोटोपन बढाउनुका साथै टाइप २ डाइबेटिक बढाउँछ । त्यसैले अरू पेयपदार्थभन्दा पानी नै छान्नुहोस् । यदि सादा पानी पिउन मन पर्दैन भने पानीमा सुन्तला, कागती, खरबुजा वा काँक्रोका टुक्रा राखेर पिउन सक्नुहुन्छ ।
४. व्यायामका लागि समय छुट्याउनुहोस्
बिहान जुरुक्क उठेर कफीको कप नसमाउनुहोस् । उठ्नुहोस् र हिँडिहाल्नुहोस् व्यायामका लागि । केही गहिरो श्वास–प्रश्वास लिने र मांसपेशी तन्किने व्यायाम गर्नुहोस् । बिहान सुरुवातको व्यायाम शारीरिक तथा मानसिक दुवै स्वास्थ्यका लागि उपयोगी छ । प्रत्येक दिन ३० मिनेट व्यायाम हप्तामा ३ दिन मात्र गर्दा पनि आजीवन स्वास्थ्य रहन सकिन्छ । अर्थात्, यसले रोगबाट टाढै राख्छ । यदि एकैपटक ३० मिनेट व्यायाम गर्न सक्नुहुन्न भने दिनभर थोरै–थोरै समय भए पनि हिँड्नुहोस् ।
५. अफलाइन हुनुहोस्
इमेल तथा सोसल मिडियामा धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ ? साथीभाइ तथा परिवारसँग अपडेट आवश्यक छ, तर सधैँ अरूको गतिविधि, तस्बिर हेरेर समय बित्छ भने निश्चित समय मोबाइल अफ गर्ने तालिका बनाउनुहोस् । स्क्रिनमा बिताउने समय घटाउनु भनेको अरू कामका लागि समय निकाल्नु पनि हो । केही समय यताउता हिँड्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस् करेसाबारीमा काम गर्ने समय निकाल्नुहोस् र भान्सामा पनि समय बताउनुहोस् ।
६. केही नयाँ सिक्ने रुचि राख्नुहोस्
नयाँ कुरा सिकिरहने रुचि राख्नुभयो भने दिमाग स्वास्थ रहन्छ । डान्स क्लास, क्रियटिभ राइटिङ, वर्कसपजस्ता कुराका लागि समय निकाल्नुहोस् । नयाँ भाषा पनि सिकिरहनु फाइदाजनक हुन्छ । मानसिक काममा व्यस्त भइरहनु भनेको तपाईंको बुढ्यौली घटाउनु पनि हो र यसले अल्जाइमरजस्तो रोगको प्रभाव पनि कम गराउँछ ।
७. धूमपान त्याग्नुहोस्
यदि धूमपान गर्ने बानी छ भने, त्यागिहाल्नुहोस्, जुन तपाईंको स्वस्थ जीवनयापनको पहिलो खुट्किलो हुनेछ । धूमपान छोडेपछि शरीर छिट्ट्रै ठाउँमा आउँछ । चुरोट खाएको २० मिनेटमा प्रेसर डाउन भइसक्छ भने किन नत्याग्ने त बानी ! तपाईं मेडिकेसनमा हुनुहुन्छ भने पनि धूमपान नगर्दा प्रभावकारी हुन्छ ।
८. मस्त निदाउनुहोस्
राम्रो निदाउनुका उपयोगिताको लामै लिस्ट बन्न सक्छ । रातको मस्त निद्रा तपाईंको राम्रो दिनको रिफ्लेक्सन हो । यसले दिनभर मुड राम्रो, स्मरणशक्ति तेज राख्नुका साथै नयाँ कुरा सिक्न सहयोग पुग्छ । पूर्ण निद्राले कालान्तरमा फिट राख्छ र मुटुरोगबाट जोगाउँछ । राति ढुक्कले ७–९ घण्टा सुत्नुहोस् । एकै समयमा सुत्ने र उठ्ने र तालिका बनाउनुहोस् ।
९. मांसपेशीलाई लचिलो बनाउनुहोस्
मांसपेशी स्ट्रेचिङ तालिमले शरीरलाई फिट राख्छ, शरीरमा बोसोको मात्रा घटाउँछ । स्लिम बनाउनुका साथै उर्जा प्रदान गर्छ । त्यसैले स्ट्रेचिङ ट्रेनिङ अभ्यास, जस्तै, योग, पुस–अप, श्वास–प्रश्वास, आदि हप्तामा दुई दिन गर्ने गर्नुहोस् ।
१०. घरबाहिर निस्किने गर्नुहोस्
सूर्याेदयपछि केही मिनेट घरबाहिर निस्किने गर्नुहोस् । यसले भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ । हड्डी बलियो बनाउँछ, मुटुका लागि फाइदाजनक हुन्छ र मुड राम्रो बनाउँछ । यसको मतलब बाहिर निस्कँदा तपाईं टिभी स्क्रिन साथै कम्प्युटरबाट पनि छुटकारा पाउनुहुन्छ । यसका लागि घरनजिकैको प्राकृतिक हराभरायुक्त ठाउँ रोज्न सक्नुहुन्छ । एउटा अध्ययनले पुष्टि गरेको छ कि– केही समय हरियालीमा बिताउने मानिस सधैँ सहरी क्षेत्रमा मात्रै बस्नेको तुलनामा शान्त हुन्छ ।
११. सधैँ सन्तुलित रहनुहोस्
सन्तुलित भन्नासाथ शरीरिक र मानसिक दुवै हुन्छ । युवावस्था होस् वा वृद्धावस्था, धेरै उत्साही र धेरै निराशाले दुर्घटना निम्त्याउँछ । सबै घटनालाई मनन गरेर शान्त रहने प्रयास गर्नुहोस् ।
१३. एकाग्र रहनुहोस्
ध्यानमग्न रहन प्रयास गर्नुहोस्, यसको मतलब हुन्छ कि, चाहनुभयो भने तपाईंले आफूअगाडिको गुलाबको वास्ना लिन पनि रोक्न सक्नुहुन्छ । अध्ययनले पुष्टि गरेका छन्, सचेत हुनु भनेको तनावमुक्त रहनु हो । एउटा अध्ययनले भनेको छ, नियमित ८ हप्ता मेरिटेसन गर्नुभयो भने तपाईंको दिमागसम्बन्धी इमोसन, सिकाइ र स्मरण सबै परिवर्तन हुन्छ ।